Inona no atao hoe jiro suction magnetika? - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Inona ny jiro manintona andriamby?
2021 / 05 / 30 FisokajianaInterior design 5922 0
Miaraka amin'ny fiakaran'ny minimalism eo amin'ny tontolon'ny endrika, tonga ny firafitry ny jiro tsy misy jiro lehibe. Ny jiro andriamby dia nanjary singa manan-danja amin'ny famolavolana jiro anatiny, koa inona marina ny jiro andriamby? Inona avy no ilain'ny jiro andriamby ary ahoana no tokony hamolavolana azy ireo? Androany, hiresaka momba ny jiro andriamby isika amin'ireto lafiny manaraka ireto.
Tombontsoa sy fatiantoka ny jiro andriamby
Ireo seho misy jiro manefy
Fomba fametrahana jiro andriamby
Vidiny sy marika misy jiro andriamby
Fifanarahana avo sy fanitsiana maimaimpoana.
Ny jiro mitsoka magnetika dia azo ahitsy amin'ny fotoana rehetra mifanaraka amin'ny filàna, ny karazana jiro ary ny isan'ny jiro ilaina hitadiavana. Malemy azo ampiasaina izy io.
Vokatry ny loharano maivana isan-karazany.
Ny famolavolana ny hazavan'ny andriamby dia mandray ny hevitry ny modularité. Aorian'ny fametrahana ny làlana dia afaka misafidy malalaka ny fomban'ny hazavana ianao. Afaka misafidy karazana isan-karazany lehibe ianao. Ny jiro ambany, ny jiro, ny jiro grille, ny tondra-drano, ny jiro pendant dia azo fidina ireo, fa koa karazana fomba isan-karazany amin'ny fampiasana azy. Ny fomban'ny luminaire dia mamaritra ny vokatry ny loharanom-pahazavana dia tsy mitovy, mety amin'ny filàna sehatra samihafa.
Tsy misy valindrihana azo tratrarina ihany koa raha tsy misy jiro lehibe.
Raha atambatra amin'ny endrika famolavolana minimalista malaza, ny famolavolana jiro tsy misy jiro lehibe dia nanjary nalaza tsikelikely. Fa amin'ny ankapobeny, tsy ny jiro lehibe no ampidirina ao anaty jiro na esorina ny jiro, izay mamaritra fa tsy misy valindrihana tsy afaka manao jiro lehibe. Ny fipoiran'ireo jiro mioka amin'ny andriamby dia azo apetraka mivantana eo ambonin'ny tampon'ny làlana, ary avy eo hametraka jiro mioka amin'ny andriamby, mba hahatratrarana ny endrik'ilay valindrihana raha tsy misy ny jiro lehibe.
Fanaraha-maso sy fanamboarana.
Rehefa manala sy manamboatra izy dia esory fotsiny ny famatsian-jiro ary esory ny jiro sy ny lanterne amin'ny làlan-tsoka manetona. Mora ihany koa ny mamolavola endrika sy manolo amin'ny dingana manaraka. Na izany aza, na dia mora esorina sy soloina aza ny loharano maivana, fa raikitra ny lalan-jiro magneto. Raha sendra tsy dia mifandray ianao, simba ny làlana, sarotra be ihany koa ny fikojakojana. Ka ity endri-javatra ity dia sady tsara no ratsy, tsy azo antsoina hoe tombony tanteraka.
Fametrahana jiro suction magnetika miorina. Voalohany indrindra, mila manao valindrihana ianao, manaova slot isan'ny jiro mitroka manoka manokana. Izy io dia ampiasaina hametrahana ny lalan-jiro andriamby, mampitombo ny vidin'ny fananganana valindrihana.
Tsy dia matihanina ny fananganana mpiasa.
Ny fametrahana jiro andriamby dia mitaky fiaraha-miasa amin'ny endrika ambony sy ny endrika boriboritany. Fifanarahana mpandrafitra sy elektrisianina, indrindra ny fepetra takiana amin'ny sehatra ambony henjana kokoa. Ka ny tsy fahaizan'ny mpiasa miasa dia mety hitarika any amin'ny fametrahana ratsy sy fampiasana ratsy.
Ny làlam-pifandraisana dia miafina napetraka ao amin'ny làlan'ny valindrihana. Ny fametrahana làlana toy izany dia tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ny valindrihana. Eto dia mila mijery tsara ny sakan'ny làlana ianao, amin'ny ankapobeny misy 40MM sy 25MM habe roa. 40MM no ampiasaina matetika ho an'ny volavolam-panjakana, atoro ny trano hifidy 25MM.
Ny lalantsara mitaingina valindrihana dia ny fampiasana ny clip namboarina tao amin'ny lalantsara am-boalohany, tsy misy valindrihana. Ny tampon-tampon'ny tampon-tany dia azo tsapain-tanana fa fametrahana jiro mitroka magnetika.
Làlan-jiro misintona andriamby andalana
Ny làlam-pandrefesana andriamby andriamby dia matetika ampiasaina amin'ny famolavolana ny birao ho an'ny daholobe. Fomba fametrahana ny làlana ampiasaina raha avo loatra ny haavon'ny habakabaka.
b. Karazan-jiro sy jiro
Hihaona amin'ny jiro fototra mifototra amin'ny zoro azo ovaina amin'ny jiro mety hahatratra ny fifantohana marina. Izy io dia malefaka sy azo ovaina, manasongadina ny ifantohan'ny jiro.
Hihaona amin'ny jiro fototra, ny maodely azo ahodina dia mety hihaona amin'ny filan'ny jiro maro-zoro ihany koa mba hahatratrarana ireo karazana valin'ny fanasana rindrina.
Famolavolana Floodlight, famoahana hazavana fanamiana. Izy io dia afaka manatsara ny famirapiratry ny habaka ary mifanena amin'ny jiro fototra. Ny endrika dia afaka mitondra traikefa kely azo jerena kely sy manatsara ny rivotra iainana.
Jiro jiro pendant
Rehefa avo loatra ny haavon'ny habakabaka ary mila mahatsapa ny vokatr'ilay jiro akaiky ianao dia afaka misafidy ny jiro pendant karazana jiro pendant.
Sehatra azo ampiharina amin'ny jiro mitsentsitra andriamby
a. Toerana an-trano
Ny jiro andriamby ho an'ny habaka an-trano dia tsy vitan'ny hoe manana jiro fototra ihany fa mety mahafeno ny filan'ny jiro accent eo an-toerana ihany koa. Indrindra ho an'ny endrika minimalista, ny jiro andriamby dia tsy ny anjara asan'ny jiro ihany. Indraindray ny track + lightlight dia ao anatin'ny famolavolana backdrop ihany koa.
b. Tontolo iainana ao amin'ny birao
Ny jiro andriamby dia matetika ampiasaina amin'ny famolavolana ny toeran'ny birao mba hanatsarana ny atmosfera nefa tsy masiaka. Ny endrika maodely dia mampitombo ny fahafaha-mihetsika amin'ny jiro.
c.Kischen sy toerana fidiovana
Ao an-dakozia sy any amin'ny efitrano fandroana, raha mampiasa valindrihana plasterboard ianao, dia afaka mampiasa jiro andriamby ihany koa. Ny vokany ankapobeny dia ho minimalist kokoa. Ilay jiro lehibe io ihany no afaka mampiasa jiro na jiro. Ny jiro mifantoka manoloana ny fitaratra dia afaka mampiasa jiro na jiro grille.
Fomba fametrahana ny hazavana andriamby
a. Loharano maivana
Ny fomba fametrahana loharanom-pahazavana maivana dia tsotra be. Mila apetaka amin'ny làlana napetraka fotsiny ny loharano hazavana voafantina, ampifanaraho ny toerana sy ny zoro. Tena mety ny fametrahana.
Nalevina efa nalevina (tsy vita ny valindrihana)
Apetraho mialoha ny làlana alohan'ny hamehezana ny valindrihana, ary avy eo hamehezana ny valindrihana amin'ny valindrihana ho an'ny fitsaboana eny ifotony. Ity dia hanolotra endrika làlana manify miaraka amin'ny maodely tsotra.
Voapetraka efa tafiditra (efa vita ny valindrihana)
Rehefa vita ny valindrihana dia mbola te-hametraka jiro andriamby. Azonao atao ny manapaka slot eo amin'ny tampony ary mametraka ny làlana. Avy eo hoso-doko ny làlana, amin'izay hahafahan'ny fampiasana jiro manetsoka andriamby. Ity fomba ity dia mitondra safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifa izay efa nanao ny fitsaboana ambony indrindra nefa mbola te hampiasa jiro manetsika.
Nopetahana ny valindrihana
Rehefa voafetra ny haavon'ny habakabaka, na ny teritery amin'ny teti-bola dia tsy te-valindrihana, raha mbola te-hametraka jiro ianao dia azonao ampiasaina ny fomba misokatra. Mametraha snap iray eo ambany ary apetraho amin'ny làlana voalohany ambony ilay lalana. Apetraho ny toerana misy ny mpanova, azo tratrarina ihany koa ny fametrahana jiro mavo.
Miorina amin'ny ambonin'ny tampony tany am-boalohany, raha te hanana ny toetra mampifanentana sy tsotra ny jiro mitsoka magnetika ianao, fa te hampihena ny haavon'ny loharano maivana koa. Azonao atao ny mihevitra ny mihantona làlana, mihantona lalana amin'ny famolavolana ny birao ho an'ny daholobe dia be mpampiasa kokoa.
c. Mpandika teny
Satria ny jiro mioka amin'ny andriamby dia lalan-kely misy herinaratra, noho izany dia mila mampiasa mpanova ianao. Avadiho ny herin'ny AC 220V ho 24V sy 48V ho an'ny lalan-tsindroka manara-penitra mba hanafoanana ny mety hitrangan'ny herinaratra. Matetika misy karazany 2 ny mpanova, singa iray ary efa namboarina. Transformer iray monja dia fohy kokoa, fa ny ankamaroan'ny lalamby 25MM dia tsy azo ampiasaina amin'ny sakany noho ny olana. Ireo mpanova alohan'ny fandevenana dia apetraka amin'ny toerana mora idirana sy tazonina. Tahaka ny seranan-tsambo fidirana amin'ny rivotra afovoany, ao anaty vata famonosana mihantona, ao anaty boaty elektrika ao an-tokantrano, ary amin'ny toeram-pialan-tsasatra hazavana.
▲ Fanovana ankapobeny
▲ Transformer maharitra
Vidiny sy marika an'ny hazavana andriamby
Ny vidin'ny hazavan'ny andriamby dia misy lalamby, jiro ary kojakoja. Ny vidiny manokana dia miovaova arakaraka ny fitaovana voafantina. Ny vidin'ny làlana dia 90-150 yuan isaky ny metatra. Jiro, avy eo 100-300 yuan tsirairay. Ny fividianana ankapobeny ny orinasa dia hanampy amin'ny fandrafetana ireo kojakoja ilaina sy ny isan'ny.
Previous :: Inona ny loko simenitra? Next: Inona ny marbra misy rano?
2021 / 08 / 15 3839
2021 / 08 / 14 3350